Mareykanka oo caawimaadka dhaqaale ka joojiyay Falastiin | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Mareykanka oo caawimaadka dhaqaale ka joojiyay Falastiin
Mareykanka oo caawimaadka dhaqaale ka joojiyay Falastiin
Muqdisho August 25 (SNTV):– Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in in ka badan $200m (£155m) oo ah caawimaad dhaqaale oo Mareykanka u qoondeeyay Magaalada Gaza iyo Daanta Galbeed ee Falastiiniyiinta loo weeciyo meel kale.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa lagu sheegay in go’aankan la qaatay markii dib-u-eegis lagu sameeyay dhaqaalahaas in uusan ku bixin hanaan waafaqsan danaha qaranka Mareykanka.
Afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa jimcihii sheegay in la gaaray go’aanka dhaqaalihii Falastiin la siin jirey lagu weeciyay hase yeeshee afhayeenku ma sheegin halka lacagtaas lagu bixin doono.
Horey Mareykanka waxaa ay hakiyeen $65m oo la siin jirey hey’adda QM u qaabilsan qaxootiga Falastiin.
Xiriirka u dhaxeeya Falastiin iyo Mareykanka ay ayaa adkaa tan iyo markii Trump uu qabtay talada wadankaas,
Waxayna arrinta sii xumaatay markii Madaxweyne Trump bishii December sanadkii 2017, uu caasimadda Isreal u aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus, iyadoo Falastiiniyiintu Mareykanka u eedeeyeen in uusan dhex dhexaad ka noqon karin qadiyada Falastiin.
Maamulka Mareykanka ayaa sidoo kale, hakiyay caawimaadii dhaqaale ee la siin jirey Falastiin.
Go’aankaas ayaa waxaa walaac ka muujiyay Falastiiniyiinta iyo laanta QM u qaabilsan qaxootiga Falastiin, waxayna sheegeen in nolasha ay ku adkaaneyso muwaadiniinta Falastiiniyiinta ah.
Si kastaba, saraakiisha Amerikaanku qorshaha kuma darsan dhaleeceynta caalamka ugu imaan karto joojinta kaalmadaas la siin jirey dadka ku nool Gaza oo markii horeba nolashada ku adkeyn.
Previous articlekoox ka tirsan Maleeshiyaadka Al-shabaab oo lagu khaarajiyey Gobolka Baay
Next articleWasaaradda Waxbarashada XFS oo Macalimiin tababar ugu soo xirtay Muqdisho